sonitattoo Matshi 15, 2017
1. I-Owl Tattoo ngasemva i-watercolor Idizayini ebomvu nelinki ebomvu ivelisa ubukeka obuhle
Abafazi abakwaBrown bathanda i-Owl Tattoo ngasemva nge-watercolor bhanya eluhlaza kunye ne-pin inkinki ukwenzela ukuba babonakale bebhenkce kwaye bethandeka
2. Owl Tattoo kwi-sleeve yesiqingatha kubangela ukubukeka okumangalisayo
Amantombazana aBrown aya kuthanda i-inkinobho ebomnyama i-Owl Tattoo kwi-sleeve yabo yesiqingatha; lo mdwebo we tattoo kubangela ukuba babonakale bemangalisa kwaye behle
3. Owl Tattoo kwithanga Inika amantombazana ukuba abukeke kakuhle
Amantombazana, ngokukodwa abembethe iifutshane ezimfutshane kunye neengubo ezimfutshane baya ku-tattoo ye-Owl emathangeni abo ukuze babenze bathande ngakumbi kubantu.
4. I-Owl idizayini ye-Tattoo eneenki ezibalabala yenza ukuba ingalo yesobunxele ibonakale inkulu
Abafazi abanamabalaphu amakhange amancinci baya kuthandana ukufumana lo mbala wokuyila umbala, i-Owl Tattoo kwisandla sabo sobunxele ukwenzela ukuba babonakale bekhangele.
5. Owl Tattoo ngasemva, yenza amantombazana akhangeleke kakuhle
Amadoda aphethe isikhumba somzimba we-peach aya kuhamba le Tattoo ye-Owl eqaqambileyo kunye neentyantyambo zentyatyambo emhlane wabo, ukwenzela ukuba babe nobukeka obuhle.
6. Owl Tattoo kwiphepha elingemuva kubangela ukubukeka okuthabathayo
Amantombazana agqoke ama-blouses angenamikhono athanda ukufumana i-Owl design tattoo kwi-shoulder shoulder. Oku kwenza ukuba bajonge ngakumbi
7. I-Owl Tattoo yamadoda aneenki ebomvu yenza ukuba ibhinqa likhangeleke likhangele
Abasetyhini bathanda i-Owl Tattoo ehlombe labo kunye ne-inkinki ebuninzi; oku kubangela ukuba bajonge
8. I-tattoo ye-Owl ngasemva yenza intombazana ibonakale njalo cute
Amantombazana athanda ukwenza i-Owl Tattoo emhlane wabo. Ukubunjwa kwe tattoo kubangela ukuba babonakale beshushu kwaye bethandeka
9. Owl Tattoo kwicala yenza intombazana ikhangele
Amantombazana aBrown aya kuthanda i-Owl Tattoo kwicala lawo kunye ne-inkinki emnyama; lo mdwebo we tattoo wenza ukuba bahle kwaye bahle
10. I-tattoo ye-Oww ehlangothini lomxho inika amantombazana ukuba abukeke ashushu kwaye athande
Amantombazana, ngokukodwa abembethe iifutshane kunye neengubo ezimfutshane baya ku-Tattoo ye-Owl ehlangothini lwabo ukuze babenze bethandane kwaye banomdla.
11. I-Owl Tattoo ehlombe izisa ukubukeka okuthabathayo
Amantombazana amaBrown agqoke kwiipopu ezingenamikhono baya kuthanda i-Owl Tattoo ehlombe; lo mdwebo we tattoo kubangela ukuba babonakale benqabileyo kwaye bahle
12. I-tattoo e-Owl ecaleni lentshonte inika amantombazana ukuba abukeke kakuhle
Tattoos zeJometridesign mehndiiidotiI-Ankle Tattoosizifuba zesifubacute tattoostattoo yedayimanizomculo tattoosiifoto eziphakamileyotatna tattooiifotto zentamotattootattootattooszinyoniIintliziyo zeTattoosiipattoosukutshiza amathambotattoosizithunywa zezulutattoosbathanda i tattoostattotattoo yamehlotattoos zenyangatattoos kubantungombonotattoosngesandlaihoi fish tattoosibinitatto flower flowertattoos zelangaiimpawu zezodiac zempawutattoos zohlangaIintyatyambo zeTattooiifatyambo zeentyatyamboi-cherry ityatyambozengalo zengalotattoos kumantombazanaizigulanei-tattoosicompass tattooowona mhlobo womhlobotatto tattoosIndlovu yeendlovutattoos ezinyawotattoo engapheliyoutywala tattooi tattoo